China Silicone Masterbatch LYSI-502C Ukukhiqiza nefektri | Silike
Abicah Masterbatch LYSI-502C
I-Silicone Masterbatch (i-Siloxane Masterbatch) I-LYSI-502C ukwakheka okunamathele okunokuqukethwe okuphezulu kakhulu kwe-ultra high molecular weight siloxane polymer ehlakazeke ku-ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA). Isetshenziswa kabanzi njengesengezo esisebenza kahle kuhlelo lwe-resin ehambisanayo ye-EVA ukuthuthukisa izakhiwo zokucubungula nokuguqula ikhwalithi yendawo.
Qhathanisa nezithasiselo ezijwayelekile eziphansi zamangqamuzana ze-Silicone / Siloxane, njengoyili weSilicone, uketshezi lwe-silicone noma ezinye izithasiselo zokucubungula uhlobo, uchungechunge lwe-SILIKE Silicone Masterbatch LYSI kulindeleke ukuthi lunikeze izinzuzo ezithuthukisiwe, isb. Isilayidi esincane, ukukhishwa kwesikhunta okuthuthukisiwe, ukunciphisa i-die drool, i-coefficient ephansi yokungqubuzana, izinkinga ezimbalwa zokupenda nokuphrinta, kanye nobubanzi obubanzi bamakhono wokusebenza.
I-MI (230 ℃, 2.16KG) g / 10min
Isilinganiso% (w / w)
(1) Thuthukisa izakhiwo zokucubungula kufaka phakathi ikhono lokugeleza okungcono, i-extrusion die drool, i-torque engaphansi kwe-extruder, ukugcwaliswa okungcono kokukhululwa
(2) Thuthukisa ikhwalithi yendawo efana nokushibilika kwendawo, i-Coefficient ephansi yokungqubuzana, i-Greater nemihuzuko nokumelana kokuqala
(3) throughput Faster, ukunciphisa umkhiqizo ukukhubazeka rate.
(4) Thuthukisa ukuzinza ngokuqhathaniswa nosizo lokucubungula lwendabuko noma izinto zokugcoba
(1) Izakhi zekhebula ze-HFFR / LSZH
(2) izicathulo ze-EVA
(3) imikhiqizo Foam EVA
(4) Ama-elastomers we-Thermoplastic
(5) Amanye amaplastiki ahambisana ne-EVA
I-SILIKE LYSI series silicone masterbatch ingacutshungulwa ngendlela efanayo nomphathi we-resin abethembele kuyo. Ingasetshenziselwa inqubo yokuncibilika yokuncibilika okufana ne-Single / Twin screw extruder, umjovo wokubumba. Ukuhlanganiswa komzimba nama-pellets angama-virgin kuyanconywa.
Lapho ifakwa ku-EVA noma i-thermoplastic efanayo ngo-0.2 kuya ku-1%, kulindelwe ukucubungula nokugeleza kwe-resin, kufaka phakathi ukugcwaliswa okungcono kwesikhunta, i-torque engaphansi kwe-extruder, izithambisi zangaphakathi, ukukhishwa kwesikhunta kanye nokuhamba ngokushesha; Ezingeni lokungeza eliphakeme, 2 ~ 5%, izakhiwo zomhlaba ezingcono kulindeleke, kufaka phakathi i-lubricity, isiliphu, i-coefficient ephansi yokungqubuzana kanye ne-mar / scratch kanye nokumelana okukhulu kwe-abrasion
25Kg / isikhwama, isikhwama sephepha lesandla
Ezokuthutha njengekhemikhali engeyona ingozi. Gcina endaweni epholile, enomoya omuhle.
Izici zoqobo zihlala zingaguquki izinyanga ezingama-24 kusukela osukwini lokukhiqiza, uma zigcinwa kwisitoreji sokuncoma.
I-Chengdu Silike Technology Co., Ltd ingumkhiqizi nomphakeli wezinto ze-silicone, ozinikele ku-R & D yenhlanganisela yeSilicone ene-thermoplastics yama-20+ iminyaka, imikhiqizo efaka kodwa engalinganiselwe ku-Silicone masterbatch, i-Silicone powder, i-Anti-scratch masterbatch, i-Super-slip Masterbatch, i-Anti-abrasion masterbatch, i-Anti-Squeaking masterbatch, i-wax Silicone ne-Silicone-Thermoplastic Vulcanizate (Si-TPV), ukuthola eminye imininingwane nedatha yokuhlola, sicela ukhululeke ukuxhumana ne-imeyili kaNks Ammy Wang: amy.wang@silike.cn
Langaphambilini I-ANTI-WEAR AGENT LYSI-10
Olandelayo: silimer tm 5050
Abicah Abrasion Masterbatch
Okufanayo Silike LYSI-306
SILICONE umgubo LYSI-100A
Abicah Masterbatch LYSI-306C
U-SILICONE POWDER S201
I-ANTI-WEAR ANTED NM-1Y
Abicah Masterbatch LYSI-408